Iplatifti yokuHlola amaShishini ngokudityaniswa kweNtlalo: Pluck
NgoMvulo, Julayi 2, 2012 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Abathengi abakwi-Intanethi bakhetha ukwenza ishishini kunye nabarhwebi ababathembayo, kwaye ukuphucula igama lebrendi kufuneka kube yeyona nto kugxilwe kuyo kuyo nayiphi na inyathelo lokuqala lonxibelelwano.
Ukuphononongwa kwabathengi yindlela eqhelekileyo kunye nexesha elivavanyiweyo lokwakha ukuthembeka kwegama. Olu hlaziyo kufuneka lubonakalise amava okwenyani nokunyaniseka kumthengi othengileyo wazama imveliso okanye inkonzo. Kodwa umbuzo wesigidi seedola yindlela yokufumana ithemba lokukholelwa ukuba umvavanyi ngokwenyani ungumthengi obonelela ngovavanyo oluchanekileyo, hayi umthengisi efihla ipropaganda?
Ezinye izikhombisi zibandakanya:
Nika iinkcukacha malunga nomvavanyi. Ngelixa kunokuba kungenakwenzeka ukubonelela ngeenkcukacha zonxibelelwano, isixeko kunye nombuso womvavanyi, kunye nomhla wokuthenga, unokuqinisa ukuphononongwa
Sebenzisa amandla eendaba ezentlalo. Izimvo zabahlobo, okanye ingcali kubantu ongabaziyo ibalulekile.
Nikezela ngolwazi kumathemba anokubanceda baqinisekise uphononongo Izifundo zamatyala, amaxwebhu obuchwephesha, amaphepha amhlophe njl.
Khankanya ezona zigxeko ncomo kunye nophando olunxulumene noko kwimidiya yakho yoluntu, kwaye uyiphonononge ngeengxoxo, ukhetho lwezimvo kunye nohlaziyo.
Abathengisi banokusebenzisa izixhobo ezinje Hlanganisa uPhononongo, iqonga lokuphononongwa ngokudibeneyo kwezentlalo ukuqhuba ukuzibandakanya kwinkqubo.
Ukuphononongwa kwakhona iqonga lichonga abathengi abafanelekileyo kwaye lifune ingxelo yabo, libabonelele ngeendlela zokufaka iifoto kunye neevidiyo ngokunjalo. Iqonga emva koko lipapasha ngokuzenzekelayo uphononongo kumajelo akhethwe kwangaphambili, kwaye livumela amalungu oluntu ukuba athumele ingxelo, yiyo loo nto ekhaba ukuqala ingxoxo edibeneyo enokunika ukuqonda ngakumbi kwithemba. Umthengisi ugcina amandla okumodareyitha ukuqinisekisa ukuba yonke into ihlala ilawulwa. Umvavanyi naye ufumana ukhetho lokwabelana ngohlaziyo kuFacebook, Twitter nakwiLinkedIn.
Nangona kunjalo, umbuzo wokuthenjwa koqwalaselo uya kuhlala. Yongeza Iifilitha zethemba, isixhobo esinomdla, sinokukunceda oko. Iifilitha zeTrust zivumela ithuba lokujonga uphononongo ukuba lubone kuphela uphononongo olungeniswe yimithombo abathembayo, enje ngabahlobo babo bakaFacebook, okanye iingcali abazihloniphayo. Kubathengisi, iPlagi ibonelela ngenkqubo yemivuzo edityaniswe ngokupheleleyo ebanceda ukuba babone kwaye badibanise uphononongo ngaphandle kweengcali zemveliso kunye namanye amalungu anefuthe kuluntu olukwi-Intanethi olunokuthenjwa.
Abathengisi nangona kunjalo banokusebenzisa uphononongo lwePlack ngeenjongo ezibanzi kude kunesixhobo sokupapasha uphononongo oluthembekileyo. Umzekelo, ukudibanisa uPhononongo lokuPhononongwa kwiphepha lemveliso kwiwebhusayithi, okanye nakwesinye isiza esincinci, kunceda ekuphuculeni isikhundla seinjini yokukhangela.
tags: ukuhlolwa kwabaxhasikhuphaiqonga lokujonga kwakhona